ကြှဲ/နှား မြားအတှကျ အဖိုးတနျ ဆေးဖကျဝငျ ဗီလား(သို့) ဗီလား တဈကောငျ ကြှဲတဈထောငျ – Nyi Ma Lay
ကြှဲ/နှား မြားအတှကျ အဖိုးတနျ ဆေးဖကျဝငျ ဗီလား(သို့) ဗီလား တဈကောငျ ကြှဲတဈထောငျ
ဗီလား တဈကောငျကို နှားတငျးကုတျ ကြှဲတငျးကုတျ မြားမှာ ခြိတျဆှဲထားရငျဖွငျ့ ကြှဲနှားမြား ရောဂါဘယ ကငျးဝေးစပေါတယျ။ ဒီအကောငျ ရဲ့ အမညျက”Horseshoe crab (or)Villa” ဗီလား ဖွဈပါတယျ။ ကငျးဖို/ကငျးမလို့လညျး ချေါဆိုပါတယျ။
Atlantic သမုဒ်ဒရာ ထဲ၌ အမြားဆုံးတှရှေိ့နိုငျပါတယျ။ ဆိတျ နှား ကြှဲမြားကို ဗီလားအခွောကျကို ရစေိမျတိုကျပါက ရောဂါကငျးဝေးပါတယျ။ Horseshoe crabs” ပငျလယျ ဗီလားသတ်တဝါတှဟော အခုဆိုရငျ သကျတမျးအားဖွငျ့ နှဈပေါငျး(၄၅၀)မီလီယံ ခနျ့ကြျောလှနျ၍ လာခဲ့ပါပွီ။
ဒိုငျနိုဆော(Dinosours)သတ်တဝါတှရှေိစဉျအခါကတညျးက ဗီလားတှဟော ယနအေ့ခြိနျထိ့ မြိုးသုဉျးပြောကျကှယျ မသှားသေးပါဘူး.. ဗီလားဟာ အရမျးအ ဖိုးတနျပွီး သူ့မှာ အရှားပါးဆုံး သှေးကိုပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။ သူ့ရဲ့သှေးဟာ အပွာရောငျ(blue blood)ဖွဈပါတယျ။
ဗီလားတှရေဲ့ သှေးဟာ”Limulus Amebocyte lysate”(LAL) လို့အမညျပေးထားတဲ့ ဗကျတီးရီယား ပိုးမှားသနျ့စငျ ဆေးတဈမြိုးကို ထုတျယူရရှိပါတယျ။ ဒီဆေးဟာ (Endotoxin detection) အတှကျ ထုတျလုပျထားခွငျးဖွဈပွီး လူသားတှရေဲ့သှေး/ တိရစ်ဆာနျ သတ်တဝါ တှရေဲ့သှေးထဲက ဗကျတီးရီယား ပိုးမှားမြားကိုရှာဖှေ စဈဆေးတဲ့ေ နရာမှာအသုံးပွုပါတယျ။
ဒီဆေးကို သိမျးဆညျးထားမညျဆိုလြှငျ အနညျးဆုံးအပူခြိနျ 2-8°c စငျတီဂရိတျ ရှိရပါမယျ။ဗီလားမှေးမွူရေးလုပျငနျးဟာ နှဈစဉျ အမရေိကနျ ဒျေါလာ မီလီယံနဲ့ခြီပွီး ဝငျငှရေရှိပါတယျ။ဗီလားဟာ လူသားတို့စားသုံးရနျမသငျ့ပါ..အဆိပျဖွဈတတျပါတယျ။
Villa(ဗီလား) Billa(ဘီလား)မဟုတျပါ။ Horse(မွငျး) Shoe(ရှုးဖိနပျ) Crab(ကဏနျးကောငျ) Horseshoe crab”ကို ဘာသာပွနျကွညျ့ရငျတော့ မွငျးဖိနပျဂဏနျး ဖွဈ သှားမှာပေါ့..နောကျတနညျး အဆငျပွအေောငျပွနျဆိုကွညျ့ရငျတော့ (မွငျးခှာကဏနျး)ဆိုရငျ ပိုမှနျပါလိ မျ့မယျ။
တကယျတော့ နရောဒသေ အလိုကျ အချေါဝျေါတှေ ကှဲလှဲနခွေငျးဟာ အဓိက မကပြါဘူး..ပုံကိုကွညျ့ရငျဖွငျ့ သိနိုငျပါတယျ.. ဒီနာမညျ မဟုတျဘူး ဟိုနာမညျ မဟုတျဘူးဆိုပွီး ငွငျးဆိုနကွေရငျတော့ မောသှားပါလိမျ့မယျ။
မွနျမာပွညျမှာပေါလို့ဆိုတာက နညျးပညာမရှိတော့ အရာရာဟာ တနျဖိုးမဲ့နတေတျပါတယျ။ဒီ ဗီလားတှရေဲ့သှေးဟာ သတ်တဝါတှရေဲ့အသကျပေါငျးမြားစှာကို ကယျတငျလြှကျရှိပါတယျ။
မြားစှာသောအခကျြအလကျတှကေနျြရှိပါသေးတယျ..ဒီလောကျပဲအခြိနျရလို့ ဒီမြှလောကျနဲ့ပဲဖျောပွလိုကျပါတယျ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ. ..
ဘီလားတဈေ ကာငျနှားတ ဈထောငျပါ နှားခွံတငျး ကုတျအမွငျ့ဆုံးေ န ရာမှာဘီလား အဖို ဖွဈစေ အမဖွဈစေ အခြောကျ ကိုတှဲထားရငျ တျောရုံနှားရော ဂါလုံး ဝမမဖွဈပါဘူး ကိုယျတို ငျသုံးဖူးပါတယျ ။ ကိုရဲနိုငျစိုး မွနျမာ့လယျယာ
ဗီလား တစ်ကောင်ကို နွားတင်းကုတ် ကျွဲတင်းကုတ် များမှာ ချိတ်ဆွဲထားရင်ဖြင့် ကျွဲနွားများ ရောဂါဘယ ကင်းဝေးစေပါတယ်။ ဒီအကောင် ရဲ့ အမည်က”Horseshoe crab (or)Villa” ဗီလား ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်းဖို/ကင်းမလို့လည်း ခေါ်ဆိုပါတယ်။
Atlantic သမုဒ္ဒရာ ထဲ၌ အများဆုံးတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆိတ် နွား ကျွဲများကို ဗီလားအခြောက်ကို ရေစိမ်တိုက်ပါက ရောဂါကင်းဝေးပါတယ်။ Horseshoe crabs” ပင်လယ် ဗီလားသတ္တဝါတွေဟာ အခုဆိုရင် သက်တမ်းအားဖြင့် နှစ်ပေါင်း(၄၅၀)မီလီယံ ခန့်ကျော်လွန်၍ လာခဲ့ပါပြီ။
ဒိုင်နိုဆော(Dinosours)သတ္တဝါတွေရှိစဉ်အခါကတည်းက ဗီလားတွေဟာ ယနေ့အချိန်ထိ့ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ် မသွားသေးပါဘူး.. ဗီလားဟာ အရမ်းအ ဖိုးတန်ပြီး သူ့မှာ အရှားပါးဆုံး သွေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့သွေးဟာ အပြာရောင်(blue blood)ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီလားတွေရဲ့ သွေးဟာ”Limulus Amebocyte lysate”(LAL) လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ဗက်တီးရီယား ပိုးမွှားသန့်စင် ဆေးတစ်မျိုးကို ထုတ်ယူရရှိပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ (Endotoxin detection) အတွက် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး လူသားတွေရဲ့သွေး/ တိရစ္ဆာန် သတ္တဝါ တွေရဲ့သွေးထဲက ဗက်တီးရီယား ပိုးမွှားများကိုရှာဖွေ စစ်ဆေးတဲ့ေ နရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။
ဒီဆေးကို သိမ်းဆည်းထားမည်ဆိုလျှင် အနည်းဆုံးအပူချိန် 2-8°c စင်တီဂရိတ် ရှိရပါမယ်။ဗီလားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဟာ နှစ်စဉ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ မီလီယံနဲ့ချီပြီး ဝင်ငွေရရှိပါတယ်။ဗီလားဟာ လူသားတို့စားသုံးရန်မသင့်ပါ..အဆိပ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Villa(ဗီလား) Billa(ဘီလား)မဟုတ်ပါ။ Horse(မြင်း) Shoe(ရှုးဖိနပ်) Crab(ကဏန်းကောင်) Horseshoe crab”ကို ဘာသာပြန်ကြည့်ရင်တော့ မြင်းဖိနပ်ဂဏန်း ဖြစ် သွားမှာပေါ့..နောက်တနည်း အဆင်ပြေအောင်ပြန်ဆိုကြည့်ရင်တော့ (မြင်းခွာကဏန်း)ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိ မ့်မယ်။
တကယ်တော့ နေရာဒေသ အလိုက် အခေါ်ဝေါ်တွေ ကွဲလွဲနေခြင်းဟာ အဓိက မကျပါဘူး..ပုံကိုကြည့်ရင်ဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်.. ဒီနာမည် မဟုတ်ဘူး ဟိုနာမည် မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ငြင်းဆိုနေကြရင်တော့ မောသွားပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာပြည်မှာပေါလို့ဆိုတာက နည်းပညာမရှိတော့ အရာရာဟာ တန်ဖိုးမဲ့နေတတ်ပါတယ်။ဒီ ဗီလားတွေရဲ့သွေးဟာ သတ္တဝါတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်လျှက်ရှိပါတယ်။
များစွာသောအချက်အလက်တွေကျန်ရှိပါသေးတယ်..ဒီလောက်ပဲအချိန်ရလို့ ဒီမျှလောက်နဲ့ပဲဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ..
ဘီလားတစ်ေ ကာင်နွားတ စ်ထောင်ပါ နွားခြံတင်း ကုတ်အမြင့်ဆုံးေ န ရာမှာဘီလား အဖို ဖြစ်စေ အမဖြစ်စေ အချောက် ကိုတွဲထားရင် တော်ရုံနွားရော ဂါလုံး ဝမမဖြစ်ပါဘူး ကိုယ်တို င်သုံးဖူးပါတယ် ။ ကိုရဲနိုင်စိုး မြန်မာ့လယ်ယာ
Previous post အမရေိကနျ ဒျေါလာ $100 တနျ အတုအစဈ ဘယျလို ခှဲမလဲ…?
Next post ဘုနျးကွီးကြော ငျးတှမှော ဆှမျးဘု နျးပေးခါနီး အုနျးေ မာငျးခေါကျရတဲ့ အကွောငျးအရငျး